July Dream: Vice President of (fluff)
မနာလို မရှိပါနဲ့ Speaker of the(fluff)ရယ်။ ဟဟ...
ကြိုဆိုပါတယ်.. ဂျိုးဂျုလိုင် (ဒုသမ္မတဆိုလို့လေ)
ဒု-သမ္မတကြီးရှင့် ပိုက်ဆံချေးထားတာ ပို့ ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ။
တုတမတဂျီး .. အတက်ယာဂျော်ရှေဘာဇေ . . . အဟဲ ..
ပိုက်ပိုက်ချေးဘို့လူများလာတာပေါ့. အစ်မ ကိုလဲ ၁၀၀၀၀ လောက်..
မဲပေးထားတာ မတွေ့မိဘူး ခင်ဗျ။
သီတင်းကျွတ်တာ ကြာလှပြီနော်။ ယောကျာ်း ပေးစားလိုက်ရမလား။ ကဲ ပြော..
သောကြာသားလေးက စကား မပီဘူး ထင်တယ်။ ဆုတောင်းစာကို မနည်း ဖတ်ယူလိုက်ရတယ် ဗျာ။ ဟဟ..
၁၀၀၀၀ ဆိုတာ မြန်မာငွေ ဆိုရင် ချက်ချင်းကို ချေးလိုက်ပါမယ်။ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ဆိုရင်တော့... အဟက် အဟက်... ကျွန်တော်မှာ အဲဒီလောက် မရှိဘူး ခင်ဗျ။
ပါမစ်လေး ဘာလေး လုပ်စရာ မရှိဘူးလား။ ရာထူးလေး ရတုန်းလေး။
ဂျူနီယာကို... နယ်စွန်နယ်ဖျား ပို့စေလို့ အမိန့်ထုတ် လိုက်ရမလား ခင်ဗျ။ တောရွာ ဇနပုဒ်က ပြည်သူတွေကို အကျိုးပြုဖို့ပါဗျာ။